I-Ellicott Swinging Dragon Dredge Izosetshenziswa eLwandle iJimmerson Lake
I-Ellicott Swinging Dragon Busy eIndiana
ISuperior Dredging yase-Illinois imemezele ukuthi amaphrojekthi wabo we-Fall 2017 dredge on Jimmerson Lake, Indiana, uyaqhubeka.
Umsebenzi, owenziwe i-Ellicott Swinging Dragon® dredge “JENNY-KAY” yabo entsha, uqale eSite 1 edamini elikuWest Bachelor Road ngeledlule. Izoqhubeka nomsebenzi wayo esiteshini esibheke empumalanga. Le ndawo kulindeleke ukuthi ithathe amasonto amathathu ukuphothula.
Ukusuka lapho, umsebenzi uzodlulela emaphethelweni aseningizimu echibini ukuthola amaphrojekthi amathathu ahlukene. Okulandelayo, kuzobe kucishe kusulwe isiteshi esiku-Lane 101D esibizwa ngeSayithi 8. Ukusuka lapho, isiteshi seSayithi 7 esiphambili endaweni yaseJimmerson Bluffs eceleni kweLane 205AA siyobuyiselwa.
Umsebenzi wokugcina uzobe ubuyisela leyo ndawo phambi kwesiqephu saseHilltop Park.
Ngama-cubic yadi angaphezu kuka-25,000 we-sediment okumele akhishwe ezindaweni ezihlukile ze-4 echibini. Umsebenzi kulindeleke ukuthi uhlale amasonto ayisithupha kuya kwayisikhombisa kanti uzoqhubeka nsuku zonke kuze kube uqeda.
Amaphrojekthi weSayithi 1 & 7 enziwe ukuthi enziwe ngemali eningi nge-Indiana DNR kanye nohlelo lwawo lweLake and River Enhancement (LARE), kanye nomnikelo ka-20% ovela kuJimmerson Lake Association.
Amaphrojekthi weSayithi 8 neHilltop Park, axhaswa ngasese yiqembu lawo labaninikhaya.